Boorsada Cheertainer ee sanduuqa
Weelka biyaha ee burbursan
Waa maxay baakad ku jirta sanduuqa?
Sanduuq-ku-jira sanduuq waa nooc ka mid ah baakadaha oo isku daraya sanduuq, bac iyo afka tuubada, fududeynta gaadiidka iyo qaybinta alaabta dareeraha leh wax-ku-oolnimo wax ku ool ah iyo ka-hortagga faddarayn. Boorsada: Kiishku wuxuu ka kooban yahay dhowr lakab oo filim ah ...
Intee in le'eg ayaad ka taqaanaa dhiirranaanta?
Sida bacda baakadka dareeraha ah, bacda farxadda leh ee ku jirta sanduuqa ma aha mid cusub, horraantii hal ama laba kun oo sano ka hor bini'aadamku wuxuu yaqaannaa sida loo isticmaalo haragga ariga, herbivore offal (caloosha) si loogu sameeyo bacaha biyaha ee biyaha, laakiin qalabkan ayaa la beddelay dhawaanahan waqtiyo adag oo ku habboon ...
Boorsada tooska ah ee saaxiibtinimo ku leh sanduuqa
Maanta waxaan jeclaan lahayn inaan ka wada hadalno sanduuq-ku-dhex-yaal saaxiibtinimo-cusub (beddelidda dhiirranaanta ku-habboon ee cubitainer). Waxaan caadeysannay inaan ugu yeerno sanduuq-sanduuq qumman, maxaa yeelay marka la barbar dhigo sanduuqa-nooca-barkin-dhaqameedka caadiga ah, waxay ku hayn kartaa afar gees oo saddex geesle ah gudaha ...
Safarka dibadda ee laalaabka bacda kaydinta biyaha sida loo doorto?
Socdaalka dibedda iyadoo la adeegsanayo bacaha kaydinta biyaha ee la laalaabo oo ku habboon oo bay'ada u fiican, laakiin sideen u qaadannaa bacaha kaydinta biyaha ee isku laaban? 1. Awood. Guud ahaan marka la socdo, xitaa haddii aysan jirin meel biyo-dhexaad ah, bacaha biyaha oo ay ka buuxaan 2-3L biyo ayaa ku filan socodka maalinlaha ah. Ho ...
Maxay Qaramada Midoobay u leedahay xeerar ku saabsan baakadaha? Qaramada Midoobay waxay dejisay heerar lagu kala saaro, baakadeynta, calaamadeynta iyo calaamadeynta badeecadaha halista ah, oo ay ku jiraan waddada, tareenka iyo badeecadaha halista ah ee badda. Heerarkan waxaa si taxaddar leh loo habeeyay si loogu daro standa ...
Waa maxay dhiirranow
Marba marka ka dambeysa macaamiisheena waxay bilaabayaan inay adeegsadaan dhiirranaan si ay u buuxiyaan alaabada dareeraha ah. Haddaba, waa maxay dhiirigeliye? Waa weel baakad cusub oo isku daraya dabacsanaanta Bacda ku jirta Sanduuqa iyo faa'iidooyinka la wanaajiyay ee alaabada baakadaha adag ama kuwa adag, taas oo ka dhigaysa cheeratainer meesha ugu fiican ...
Baakadaha ugu waaweyn ee KAIGUAN waa dhiirrigeliye (boorso qumman oo ku jirta sanduuqa), ldpe cubitainer, weel biyo oo burburi kara, jarriin badh-laaban iyo mashiinno buuxiya.
No. 15, Magaalada Niutang, Degmada Wujin, Magaalada Changzhou, Gobolka Jiangsu, Shiinaha.